Golaha Amaanka oo dib u eegaya cuno qabatantya hubka ee Soomaaliya oo dib loo eegayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Golaha Amaanka oo dib u eegaya cuno qabatantya hubka ee Soomaaliya oo dib loo eegayo
Tagged With: AMISOM, Somali Government, UN
Golaha Amaanka oo dib u eegaya cuno qabatantya hubka ee Soomaaliya oo dib loo eegayo
Kadib markii ay bur-burtey dowladdii Soomaaliya sanadkii 1991, dalkana ay ka dilaaceen jamhado hubeysan isla markaana ay bilowdeen dagaalo ku salaysan beelo, waxaa sanadkii 1992 la saarey Soomaaliya qaraarka 733 oo dhigaayey cunoqabatayn dhana hubka ah in lagu soo rogey Soomaaliya.
Dowladda uu madaxweynaha ka yahay Xassan Shiikh Maxamuud ayaa dalbatey in laga qaado cuno qabataynta hubka si dalka nabadgelyadiisa ay wax uga qaban karto isla markaana tayo loogu yeelo ciidamada Soomaaliya, ma ahan markii u horeysey ee Dowlad Soomaaliyeed ay dalabato i cunoqabataynta la qaado, waxaa sidaan oo kale u dalbatey Dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yusuf iyo weliba tii Shariif Shiikh Axmed.
Hadaba Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa hadda goostey in ay ka fekeraan in la qaado cunoqabatanyta hubka ee saarneyd Soomaalia 21 sano ee la soo dhaafey.
Xogahaya Guud ee Qaramada Midoobey oo la hadlaya 15 dal ee ku jira Golaha Amaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la hormariyo ciidamada Qaranka Soomaaliya, arintaani waxa ay keenaysaa in Golaha Amaanku dib uga fekero in la qaado cunoqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya, kaas oo ay dalbatey xukuumadda Soomaaliya.
Ban Ki-moon ayaa sheegay inkasta oo horumar laga gaarey arrimaha amaanka, laakiin dhaibaatadii taagneyd waa mid ka fog in la soo afjarey, waxaana kooxaha Aragagixisadu ay qaadaan weeraro iyo dilal qorsheysan.
Golaha amaanka ayaa laga doonayaa in ay dib u cusbooneysiiyaan Oggolaanshaha AMISOM ee Soomaaliya ay kaga hawlgalayaan, horraanta bisha Maarso ee 2013, waxaana lagu wadaa isla xiligaas in la qaado Cunoqabatanyta hubka ee saaran Soomaaliya.
Qorshaha ah in cunnoqabataynta hubka la qaado ayey u badantahay in ay meel marto marka la eego qaabka caalamku albaaabada ugu fureen Dowladda Soomaaliya iyo horumarka laga gaarey in kooxda al-Shabaab laga saaro magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa kula kulmey Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud magaalada Adis-ababa, waxaana madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyey codsi labaad oo ah in la qaado cunoqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya si loo hormariyo ciidamada Soomaaliya.
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobey Soomaaliya u qaabilsan Dr.Augostine Mahiga ayaa dhawaan sheegay in ciidamada Soomaaliya aysan hanan karin nabadgelyada dalka haddii AMISOM ka baxdo waxaana uu talo ku soo jeediyey in laga shaqeeyo hormarinta ciidanmada Qaranka Soomaaliya.
Kooxo khabiiriin ah ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM dalalka ay ka socdaan haddii rabshado ama dagaalo ka bilowdaan ay deg-deg ula baxayaan ciidankooda, taasna aan la heli karin ciidamo la khibrad ah oo deg-deg u beddala, taas beddlkeedana ay lama huraan tahay in dhaqaale la geliyo ciidamada Soomaaliya si ay u gaari karaan isku filnaansho.
Haddii laga qaado Soomaaliya cunoqabataynta hubka ee saaran ayey u suurta gelyasaa in dowladda Soomaaliya ay soo gadan karto hubka noocyadiisa kala duwan, sidoo kale waxay geli kartaa heshiisyo hub deeq iyo deynba ah.
Dadka ka soo horjeeda in la qaado cunnoqabataynta ayaa ku doodaya in ay ka faa’ideysan karaan kooxaha ka soo horjeeda dowladda in iyaguna hub la soo degi karaan, taas oo keeni karta khatar aad u weyn, sidoo kale waxa ay wel-wel u muujiyaan xaaladda Somaliland in dowladdu isku daydo markii ay awood hesho in ay u isticmaasho.
Inkasta oo Soomaalya cunoqabatayn hub ay saarneyd ayaa haddana hubku ka joogsan marna, waxaana iib iyo deeqba u bixinayaayey dalalka dersika la ah Soomaaliya iyo kuwo kale.